के बीमा करार गर्न बाध्य छ? | अर्थव्यवस्था वित्त
के बीमा करार गर्न बाध्य छ?
बीमा भनेको एक बीमाकर्तामा हस्तान्तरण गरेर जोखिमहरू ढाक्न एक माध्यम हो जुन ग्यारेन्टी वा उत्पन्न क्षतिहरूको सम्पूर्ण वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कार्यमा हुनेछ। जे भए पनि, यसको लागि एक शक्तिशाली उपकरण हो कुनै पनि घटना रोक्नुहोस् र जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा। किनभने वास्तवमा त्यहाँ धेरै किसिमका नीतिहरू छन् किनकि ती सबै प्रकारका गतिविधिहरू र प्रक्रियाहरू समावेश गर्दछन्। त्यहाँ स्वास्थ्य, यात्रा, घर, कार, मृत्यु, बचत, लगानी र घरपालुवा जनावरहरूको रक्षा गर्न पनि छन्। ती प्रयोगकर्ताहरूको वास्तविक आवश्यकता अनुसार सदस्यता लिन सकिन्छ, या त व्यक्तिगत रूपमा वा एकै समयमा धेरै नीतिहरू।
अहिलेसम्म यो विश्वास गरिएको थियो कि बीमा करार गर्न अनिवार्य थिएन। तर यो सत्य होईन किनकी केही ढाँचाहरू, अझै थोरै मात्र हुन्, जुन पूर्ण रूपमा उनीहरूको औपचारिकरणको आवश्यकता पर्दछ। यो सुविधाजनक छ कि तपाईलाई यो तथ्य थाहा छ किनकि तिनीहरूलाई सदस्यता न दिई अब तपाईलाई धेरै महँगो पर्न सक्छ। अन्य कारणहरू मध्ये किनकि तिनीहरू भारी सजायहरू बोक्दछन् जसमा चिन्ता गरिन्छ वर्तमान कानून। यस बिन्दुमा यसले तपाईंको व्यक्तिगत वा पारिवारिक बजेट तपाईंको जीवनमा कुनै पनि समयमा मिसमेल गर्न सक्दछ।
ताकि तपाईलाई कुनै पनि प्रकारको समस्या छैन, उत्तम विधि तपाईलाई थाहा हुन्छ कि बीमा भाडामा लिनुपर्ने अनिवार्य के हो। त्यहाँ तपाईं सुरू देखि सोचे भन्दा धेरै छन् र ती मध्ये केही सबैभन्दा सामान्यमा निश्चित छन् बीमा कम्पनीहरु बाट प्रस्तावहरु। तपाईले अनिवार्य बीमाको सूचीमा तपाईले अनौंठो आश्चर्य पनि पाउन सक्नुहुन्छ जुन हामी तल तपाईलाई तल दिन चाहन्छौं। अचम्मको कुरा होइन, तिनीहरू यस वर्गका वित्तीय उत्पादनहरूमा प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो अंशले राम्ररी परिचित छैनन्। अबदेखि तपाईसँग यसको सही ज्ञान को लागी कुनै बहाना छैन।
1 भाडामा लिनु पर्ने बीमा: आगो
2 घरपालुवा बीमा
3 व्यावसायिक बीमा
4 यात्रामा अनिवार्य नीतिहरू
5 मनपर्ने शौकहरूको संरक्षण
6 घर भाडा बीमा
भाडामा लिनु पर्ने बीमा: आगो
तपाइँलाई यो थाहा छैन होला तर रियल इस्टेटको अधिग्रहणको समयमा तपाइँले अग्नि बीमालाई औपचारिक बनाउनुपर्नेछ। यसले यी आपतकालिनबाट यस सम्पत्तिलाई रक्षा गर्न काम गर्दछ र सबै केसहरूमा यो अनिवार्य हुनेछ यदि तपाईं वास्तवमै यसको मालिक हुनुहुन्छ भने। के सामान्यतया हुन्छ यो यो विशेष नीति सामान्यतया के भित्र छन् समावेश गरीन्छ घर बीमा। जहाँ कभरेजको अन्य प्रकारहरू समावेश गरिएको छ जुन तपाईंको घरलाई सबैभन्दा ठूलो दक्षताका साथ सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
तर धेरै सावधान रहनुहोस्, त्यसैले घर बीमा आफै अनिवार्य छैन, धेरै प्रयोगकर्ताहरूको विचारको बावजुद। यदि होईन भने यसको विपरितमा उत्पाद फायर नीति हो। तपाईले कुन प्रारूप अन्तमा रोज्नुभयो त्यसले केही फरक पार्दैन, तर तपाईले यो ध्यान दिईएको सावधानीलाई सधैं ध्यानमा राख्नु पर्छ। यो वास्तवमै एक उत्पादन हो जुनसँग धेरै किफायती वार्षिक प्रीमियम सबै घरपरिवारको लागि र यसले तपाईंलाई घरमा एक हुन सक्ने एक भन्दा बढी समस्याबाट मुक्त हुन मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, यो एक उत्पादन हो जुन धेरै जटिल छैन र प्राय: सबै नै समान व्यवसायिक कन्स्ट्रन्ट अन्तर्गत मार्केटिंग हुन्छ।
यो विचित्र विशेषता द्वारा शासित छ कि अर्को बीमा को लागी अभिप्रेत खतरनाक जनावरहरू। व्यक्ति जससँग यी प्रतिलिपिहरू छन् ती तेस्रो पक्षहरू समक्ष सम्भावित घटनाहरूलाई संरक्षण गर्न यस मोडलको बीमा सदस्यता लिन अनिवार्य छ। किनभने यदि यो त्यस्तो तरीकाले छैन भने, ती खतरनाक जनावरहरूमा हालको नियमहरूको उल्ल .्घनका लागि उनीहरूलाई धेरै ठूलो जरिवाना दिइनेछ। यस अर्थमा, यस प्रकारको बीमा जो हाम्रो साथी जनावरहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ भनेर भ्रमित गर्न सकिदैन। अन्तत :, तिनीहरू पूर्ण बिभिन्न उत्पादनहरू हुन्, यद्यपि उनीहरू बीच धेरै समानताहरू छन्।
यो अनिवार्यताको अर्को हो र यदि तपाईं यस अवस्थामा हुनुहुन्छ भने तपाईंले सक्दो चाँडो पूरा गर्नुपर्नेछ। अवश्य पनि, तपाईंलाई यसको भाँडामा कुनै समस्या हुनेछैन किनकि सबै बीमा कम्पनीहरूले तिनीहरूको वर्तमान बीमा प्रस्तावमा र यी मुनि यी सुविधाहरूको एक नीति विचार गर्छन्। फरक दृष्टिकोण तपाईंको बजारमा। जहाँ हाम्रो घरमा कुकुरको विशेषताहरू ध्यानमा राखिन्छ।
तपाईंलाई यो थाँहा छैन, तर त्यहाँ काम वा व्यावसायिक गतिविधिहरूको श्रृंखला छ जुन बीमाको अनिवार्य करारको आवश्यक छ। तपाईं 500०० भन्दा बढी बिमाहरू पाउन सक्नुहुन्छ कि यसको औपचारिकरण कामदारहरूको सुरक्षा गर्न बाध्य छ। सबै प्रकारका गतिविधिहरूमा र जसमध्ये निम्नलिखित बाहिर खडा हुन्छ कि हामी तपाईंलाई तल खुलासा गर्दछौं:
व्यावसायिक बीमा (स्वास्थ्यकर्मी, सेवाहरूको रखरखाव, आदि)
अन्य गतिविधिहरूको लागि बीमा (शो, कृषि वा निर्माण)
यी अवस्थाहरूमा, यो एक बीमा उत्पादन हो जसले कार्य क्षेत्रका केही घटनाहरूलाई रोक्छ र धेरै जसो धेरै विशिष्ट हुन्छन्, उदाहरणका लागि, जुन स्वास्थ्य वा निर्माण मुद्दाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै अवस्थाहरूमा उनीहरूसँग बीमा हुनु बाहेक अरू कुनै विकल्प हुँदैन काममा केहि प्रक्रियाहरूबाट रोक्नुहोस्। केहि केसहरूमा, यी गतिविधिहरू हुन् जसले तपाईंको सुरक्षालाई ठूलो जोखिम दिन्छ। जे भए पनि, त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरूको पक्षमा यस प्रकारको बीमाको बारेमा ज्ञानको ठूलो अभाव छ र तिनीहरूलाई रोजगारदाता आफैले उनीहरूसँग सम्बन्धित नीतिलाई औपचारिक बनाउन बाध्य पार्छन्।
यात्रामा अनिवार्य नीतिहरू
तिनीहरूको अनिवार्य कार्यान्वयनको बारेमा अज्ञात अन्य बीमाहरू ती हुन् जुन सार्वजनिक यातायातमा यात्रा र विस्थापनसँग सम्बन्धित छ। एकातिर, उही शहर बीचको यात्राहरूमा र जसलाई निस्सन्देह अनिवार्य यात्री बीमा आवश्यक पर्दछ। जे होस्, सामान्यतया के यी मामिलाहरूमा हुन्छ बीमा हो कि बिलमा समावेश त्यो यात्रा गर्न किनेको छ। यस अर्थमा, प्रयोगकर्ताले केहि पनि चिन्ता लिनुपर्दैन किनकि तिनीहरूको आवश्यकताहरू सबै अवस्थामा समाहित हुन्छन्।
अर्कोतर्फ, अन्य गन्तव्यहरूमा पनि यात्रा गर्दछ, या त पर्यटक वा व्यापार ढाँचामा, तिनीहरूलाई सुरक्षा गर्दछ कि एक बीमाको दायित्व बोक्दछ। तर अघिल्लो ढाँचामा जस्तै यात्रा आरक्षण द्वारा कभर गरिएको छ। त्यो हो, ट्राभल एजेन्सी वा यातायात कम्पनी प्रभारी हो। न त यस परिदृश्यमा प्रयोगकर्ताले यसलाई सदस्यता लिनुपर्नेछ, तर यसको विपरितमा खरीद गरिएको टिकटको लागि यसलाई निःशुल्क शुल्क लगाइनेछ। जे भए पनि, यो बीमाको अर्को पक्ष हो जुन तपाईंसँग हुनुपर्दछ।
मनपर्ने शौकहरूको संरक्षण
अवश्य पनि, यो सूची अहिले सम्मका मामलाहरूमा थकित भएको छैन। होईन, किनभने बीमा तपाईसँग रहेको केही शौकहरूको अभाव हुन गएको छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं एक खेल अभ्यास जहाँ तपाईं संघ वा बस गतिविधिहरु मा सामान्य को रूप मा छन् शिकार वा मनोरन्जन गर्ने डु .्गा। अचम्म मान्नुपर्दैन, वर्तमान कानूनले तपाईंलाई नागरिक दायित्व नीति सदस्यता लिन बाध्य गर्दछ जुन यी गतिविधिहरूको विकासको परिणामका रूपमा तेस्रो पक्षलाई हुने क्षतिको बारेमा सोच्दछ। त्यो हो, यदि यो तपाईंको विशिष्ट मामला हो भने तपाईंसँग यी सुविधाहरूको नीतिलाई औपचारिकरण गर्नु बाहेक अरू कुनै समाधान हुँदैन यदि तपाईं यसलाई सामान्य रूपमा विकास गर्न केही अन्य समस्या चाहनुहुन्न भने। किनभने यदि तपाई यस आवश्यकताको पालना गर्न असफल हुनुभयो भने तपाईलाई भारी सजाय पनि दिन सकिन्छ।
सब भन्दा अधिक प्रतिनिधित्व भएका केसहरू ती मानिसहरू हुन् जुन खेल अभ्यास गर्छन् र प्रतियोगितामा भाग लिन्छन्। तिनीहरूलाई एक उत्पादन चाहिन्छ सुरक्षा र कुनै पनि घटना संरक्षण उनीहरू त्यो खेलको अभ्याससँगै विकास गर्न सक्दछन्। यो त्यस्तो चीज हो जुन लोकप्रिय दौडहरूमा विस्तार हुन्छ र जब स्वचालित रूपमा दर्ता हुन्छ तपाईंसँग यी सुविधाहरूको बीमा छ। आयोजकहरू एथलीटहरूको साथ यो सेवा प्रदान गर्न बाध्य छन्। खेलकुद घटना आफैमा अन्य विचारहरू पछाडि।
घर भाडा बीमा
एक श that्का हो कि प्रयोगकर्ताहरू जो एक घर भाडामा अपार्टमेन्ट भाँडामा लिदैछन् कि तिनीहरू बीमा नीतिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य छन् कि छैन। भाडामा। खैर, यस अवस्थामा यो सामान्य विश्वासको बाबजुद अनिवार्य छैन। यद्यपि यसको औपचारिकरण अत्यधिक सल्लाह दिईन्छ किनभने यसले सुरक्षा र एक प्रभावकारी रणनीति गठन गर्दछ यसको गुणहरू संरक्षण गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, कम्प्युटर उपकरण, टेक्नोलोजिकल उपकरणहरु र पनि यदि मामला कपडा वा फर्नीचर नै थियो। अचम्म मान्नुपर्दैन, यी सम्पत्तिहरू घर मालिकहरूको बीमाले कुनै पनि हिसाबले कभर हुँदैन।
अर्कोतर्फ, अर्को पक्षबाट, त्यो हो, रियल इस्टेट सम्पत्तीको मालिकले पनि यी आवश्यकताहरूको उत्पादन पूरा गर्नुपर्दछ। जस्तै तपाईं अन्य बीमा स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ भुक्तानी सुरक्षा र जुन तपाईं मासिक भुक्तानी को संकलन को अभाव मा केहि प्रक्रिया अघि कभर हुनेछ। अवश्य पनि, यो अनिवार्य छैन, तर पूर्ण रूपले वांछनीय हो किनकि यसले तपाईंको मालिकको सर्तमा धेरै सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
हामीले अघि नै भनेझैं, जब यो घर जग्गाको कुरा आउँछ, कानून द्वारा आवश्यक छ कि मात्र चीज आगो बिमा हो। बाँकी वैकल्पिक छन् र उनीहरू आफैले प्रयोगकर्ताहरूको इच्छामा निर्भर गर्दछ। धितो loanणमा हस्ताक्षर गर्दा पनि बैंकहरूले प्रक्रियाको लागि केही नीतिहरू समेट्छन्। यो वित्तिय को अन्तिम लागत कम गर्न एक रणनीति हुन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » बीमा » के बीमा करार गर्न बाध्य छ?
लगानी loansण: वित्तीय भन्दा बढी